Simudza Tafura Vagadziri & Vatengesi | China Simudza Tafura Tafura
Simudza Tafura Warehouse Equipment chinhu chakakosha chigadzirwa mune yekuchengetera basa inova inoratidzira bhizinesi muDaxlifter.Qingdao Daxlifter tsvagurudzo uye kugadzira scissor simudza tafura, scissor mhando pallet rori, yemagetsi scissor mhando pallet rori uye PLC inodzora otomatiki kusimudza pallet rori uye zvichingodaro. sevhisi yemutengi wedu wesikisi yekusimudza tafura nezvimwe…
China E chimiro Scissor Lift Tafura inowanzo shandisa pane pallet inobata basa iyo inofanirwa kushandiswa E mhando kusimudza tafura kusimudza iyo kumusoro, wobva washandisa forklift fambisa pallet kune mudziyo kana rori. base pane zvaunoda
Daxlifter Yakadzika Mbiri Scissor Simudza Tafura dhizaini yekuburitsa & kutakura zvinhu kana pallet mukati uye neyedu kubva kurori kana vamwe. Ultralow chikuva chinoita pallet rori kana vamwe yekuchengetera wotk michina inogona kuve nyore kubata hanle nhumbi kana nhovo.
Zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana kubva kumutengi wedu isu tinogona kupa akasiyana dhizaini yedu scissor yekusimudza tafura iyo inogona kuita kuti basa rive nyore uye hapana chero yakavhiringidzika.Best isu tinogona kuita yakagadzirirwa chikuva saizi yakakura kupfuura 6 * 5m ine anopfuura makumi maviri matani kugona.
Iyo inorema-basa yakamisikidzwa scissor chikuva inonyanya kushandiswa munzvimbo hombe dzemabasa emumigodhi, nzvimbo dzekuvaka nzvimbo dzakakura, uye nhepfenyuro dzekutakura zvinhu.
Zvigadzirwa zvinotumirwa kuEurope, America, Africa nedzimwe nyika zhinji nematunhu. Musika wepamba wakapararira mumaguta mazhinji eChina, uye zvigadzirwa zvinozivikanwa nekurumbidzwa nevatengi kumba nekune dzimwe nyika. Kambani yakaenderera mberi nekutengesa neR & D yezvikamu zviviri zvakateedzana tafura yemagetsi yekusimudza tafura uye scissor pallet marori, uye yakagadziriswa yakananga kushandisa michina.